Hamma Gadaan dhufee bakka qabtetti, seensa buluun kun sadarkaa sadarkaan guddataa dhufuun hinhafne. Herbert S Luwis madda saba Oromoo argacuuf afaanoota Kushoota bahaa bakka 24tti qoode.
Yeroo itti warri Gadaan isaanii geessee biyya bulchan, seera ilaalan, dubbii Gosaa furaniidha. Karaa polotikaatiin garuu, garaagarummaa guddaatu jira.
Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Waraanni saa harka loltuu Oromoorratti akka dhadhaa baqee dhume. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa: Ofiis garuu Roobalee dhiibuu hindandeenye. Log In Sign Up. Yeroo isaan itti sednaa Baaleefii Saidaamoorraa sossohanii hamma Wallootti qubatan waan beekamuumiti.
Sadarkaa gossaattiis hariiroon kun ittifufa.
Sirna tahu keessatti yeroo kanatti eeyba Qaalluu fudhachuun beekamaadha. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra. Eega, hawaasa keessatti Gadoomuuf carraa kan qaban ilmaan kormaa thuu hubanne. Gaggeessa Gadaa miseensa fi Marsaa Gadaa: Hariiroon kun maati duwwaa keessatti hin hafu. Orpmoo jaarsaafii ilmaan Kormaa d. Armaa gaditti sadarkaalee Gadaa jiraniifi murnoota Gadaa isaanii laalla.
Gaafa Afaan Oromoo dubbachuufi ani Oromoodha jedhanii ofwaamuun mootummaa habashaa yeroo sanaatiin hin eeyyamamnetti, Ormoonni kitaqba gosaan garaa gara akka hinbaane gochuudhaan Oromummaan akka gadi dhaabbatu hiriyootasaa waliin nama dalagedha.
Ibiddi hangafaafi quxxusutti adda bahee walkabjuuniifi waliif abboomamuun buluun dhalate. Uunkaa jireenya hawaasaa Hawaasa keessatti dhalli namaa kophaa hinjiraatu.
Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa jireenya polotikaa ilmaan Oromoocalaqqisu ayyaana buttaati. Muudanni Gadaa isaa fixee Kiiloleetti dabarse. Kanaaniis ilmaan Oromoo yeroo dhalatanirraa kaasee ilmaan kormaafi ilmaan Jaarsaatti qoodamu.
kitaba Harmuf Awaash cehee Affaarootafi Habashootatti duuluu jalqabe. Mootummooleen habashaa darban Oromoo cabsuuf jecha meeshaalee waraanaa, ogeessotaafi loltoota waliin biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa kadhachuun Oromoo irratti duulaa akka turan seenaan hinhaalle.
Kun hundi dinagdeefi polotikaa sirna hawaasaarratti hundeeyfamau; kanneenirraa calaqqisa argamaniidha. Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu.
Eega Affaarootnifi Saahootni naannoo amma jiran keessa jiraachuu jalqabanii ykn, isaanumatti aananii godaananii qubacuun waan malu. Sadarkaan kun, Tuulamaafi Ituu keessatti yeroo itti ilmaan kormaa aangoo qabachuuf ofqophessan, sadarkaa 4ffaa tahuudhaanifi dirqama loltummaa qabaachuudhaan tokko yoo tahan kaanirraa kanaan adda bahu.
Qaalluun isa oliiti jechuudha. Amaarri gara hallayyaafi holqatti galtee dhokatte.
Harmuuf Gadaan isaa dhumee Robaleen harka fudhate. Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen.
Akka bara saniitti eenyulleen aadaa kana nifudhata. Tuulama keessatti- Miseensa jedhama.